Home / Terms amin'ny Service
Ireto fehezan-dalàna sy fepetra manaraka ireto dia mifehy ny fampiasana ny tranokala opskar.com sy ny atiny rehetra, serivisy ary vokatra azo alaina na amin'ny alàlan'ny tranokala (nakambana, ny tranokala) Ny tranokala dia tompon'ny ops ("ops"). Ny tranokala dia atolotra arakaraka ny fanekenao tsy misy fanovana ny teny sy fepetra rehetra ao anatiny sy ny lalàna mifehy ny asa rehetra, ny politika (ao anatin'izany, tsy misy fetra, ny politika momba ny fiainana manokana an'ny OPS) ary ny fomba fanao izay azo havoaka tsindraindray amin'ity tranokala ity OPS (miaraka, ny "Fifanarahana").
Azafady vakio amim-pitandremana ity fifanarahana ity alohan'ny hidirana na mampiasa ny Website. Amin'ny fidirana na fampiasana ny ampahany amin'ny tranonkala, dia manaiky ny hampifanaraka ny fepetra sy ny fepetran'ity fifanarahana ity ianao. Raha tsy manaiky ny fepetra rehetra mifehy ity fifanarahana ity ianao, dia mety tsy afaka miditra amin'ny tranonkala na mampiasa tolotra. Raha heverina ho tolotra omen'ny OPS ireo fepetra ireo, dia voafetra ny fehezan-dalàna momba izany. Ny tranonkala dia tsy misy afa-tsy ireo olona izay fara fahakeliny 13 taona.
Ny kaonty opskar.com sy Site anao. Raha mamorona bilaogy / toerana eo amin'ny Website, ianao no tompon'andraikitra amin'ny fitazonana ny fiarovana ny kaonty sy ny bilaogy, ary ianao no tompon'andraikitra tanteraka zavatra rehetra izay mitranga eo ambanin'ny tantara sy hetsika hafa mifandray amin'ny nalaina ny bilaogy. Tsy azonao atao ny mamaritra na mametraka ny teny fanalahidy ao amin'ny blôginao amin'ny fomba mandainga na tsy ara-dalàna, anisan'izany ny fomba natao hanakarena ny anarana na ny lazan'ny hafa, ary ny OPS dia afaka manova na manala izay lazainy na teny fototra izay heveriny fa tsy mety na tsy ara-dalàna, na raha tsy izany dia mety hitarika ny andraikitra OPS. Tsy maintsy ampahafantarinao avy hatrany ny OPS amin'ny fampiasana tsy ampiasaina amin'ny blôginao, ny kaontinao na ireo fiarovana hafa. OPS dia tsy tompon'andraikitra amin'ny hetsika na fanararaotanao anao, anisan'izany ny fahavoazana rehetra mety hitranga vokatry ny fihetsika na tsy fanaovan-javatra toy izany.
Andraikitry ny mpandray anjara. Raha miasa bilaogy ianao, manaova hevitra amin'ny bilaogy, mandefasa zavatra ao amin'ny tranokala, mandefasa rohy ao amin'ny tranokala, na manaova (na mamela ny antoko fahatelo hanao) fitaovana azo alaina amin'ny alàlan'ny tranokala (fitaovana toy izany, "Atiny" ), Tompon'andraikitra tanteraka amin'ny atiny ianao, ary amin'ny fahavoazana ateraky ny atiny. Izay no izy, na inona na inona votoatiny resahina, sary, sary, na rindrambaiko solosaina. Amin'ny alàlan'ny fanaovana ny atiny ho azo atao, dia misolo tena ianao ary manome toky fa:
Ny fampidinana, ny kopia ary ny fampiasana ny Content dia tsy manohintohina ny zon'ny tompony, anisan'izany fa tsy voafetra amin'ny zon'ny mpamorona, patanty, marika na zo miafin'ny sekretera, ny antoko fahatelo;
Raha manana zo hanana zo ara-tsaina ianao, dia manana (i) nahazo alalana avy amin'ny mpampiasa anao ianao mba handefa na hanolotra ny Content, anisan'izany fa tsy voafetra amin'ny rindrambaiko, na (ii) azo antoka amin'ny mpampiasa anao ny zo rehetra ao amin'ny Content na ny Content;
dia manaiky tanteraka ny fahazoan-dàlana rehetra misy momba ny Content, ary efa nanao ny zava-drehetra ilaina mba handaminana tsara ireo mpampiasa farany ny fepetra takiana;
Ny votoatiny dia tsy ahitana na mametraka viriosy, kankana, malware, soavaly Trojan na votoaty hafa manimba na manimba;
Ny votoatiny dia tsy spam, tsy fitaovana maoderina na tsiambaratelo, ary tsy misy votoaty ara-barotra tsy mety na tsy ilaina amin'ny fikolokoloana mankany amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo na fanatsarana ny lozam-pikarohana fikarohana any amin'ny tranonkala fahatelo, na amin'ny hetsika tsy manara-dalàna (toy izany toy ny phishing) na mamela diso ny mpamaky ny loharanon-javatra (toy ny fanaratsiana);
Ny votoatiny dia tsy mipoitra sary vetaveta, tsy misy fandrahonana na miteraka herisetra amin'ny olona na vondron'olona, ​​ary tsy manitsakitsaka ny zo manokana na ny zon'ny dokambarotra avy amin'ny antoko fahatelo;
Ny blôginao dia tsy navoaka tamin'ny alàlan'ny hafatra elektronika tsy ilaina, toy ny rohy spam ao amin'ny newsgroups, lisitra mailaka, blôgy hafa sy tranonkala, ary fomba fanao mahazatra toy izany;
ny bilaoginao dia tsy voatonona amin'ny fomba izay mamitaka ny mpamaky anao hieritreritra fa olona na orinasa hafa ianao. Ohatra, ny URL na ny anaran'ny bilaoginao dia tsy anaran'ny olona iray hafa noho ny tenanao na orinasa hafa ankoatry ny anao manokana; ary manana ianao, raha ny atiny izay misy kaody solosaina, dia voasokajy tsara sy / na nofaritanao ny karazany, ny natiora, ny fampiasana ary ny vokatr'ireo fitaovana ireo, na nangatahin'i OPS hanao izany na tsia.
Amin'ny fampidirana ny votoatin'ny OPS amin'ny fidirana ao amin'ny tranokalanao, omenao OPS lisansa tsy manavakavaka manerantany, tsy manavakavaka sy tsy manan-danja ianao mba hamoronana, hanova, hampifanaraka ary hamoaka ny votoaty afa-tsy amin'ny tanjona hampiseho, hanaparitaka ary hampiroboroboana ny blôginao . Raha mamafa Content ianao, dia hampiasa ezaka azo ekena ny OPS mba hanesorana azy amin'ny Website, fa manaiky fa ny caching na ny references amin'ny Content dia mety tsy azo atao avy hatrany.
Raha tsy ferana ny iray amin'ireo fisehoana na fiantohana ireo, ny OPS dia manan-jo (na dia tsy adidy) aza, amin'ny fahefan'ny OPS (i) mandà na manaisotra izay atiny rehetra, araka ny hevitry ny OPS, dia manitsakitsaka ny politika OPS na manimba amin'ny fomba rehetra. na tsy ekena, na (ii) mamarana na mandà ny fidirana sy fampiasana ny tranokala amin'ny olona na fikambanana na inona antony na inona, amin'ny fahitan'ny OPS irery. Ny OPS dia tsy hanana adidy hanome famerenam-bola izay vola naloany teo aloha.3
Fanofana sy fanavaozana.
Amin'ny fisafidianana vokatra na serivisy, dia manaiky ianao handoa ny OPS ny saram-pandefasana amin'ny fotoana iray sy / na isam-bolana na isan-taona (misy fepetra fanampiny azo ampidinina amin'ny fifandraisana hafa). Ny fandoavam-bola isam-bolana dia voampanga amin'ny alàlan'ny famandrihan-trosa alohan'ny hanoratanao ny Upgrade ary handrakotra ny fampiasana an'io serivisy io mandritra ny fe-potoana isam-bolana na isan-taona. Tsy azo avotana ny vola.
Fanavaozana ny Automatique.
Raha tsy nampahafantarinao ny OPS talohan'ny famaranana ny fe-potoam-pampiasana tianao hampiato ny famandrihana, dia manavao ny famandrihana anao ary manome alalana antsika hanangona ny saram-pandraharahana isan-taona na isam-bolana azo ampiasaina (toy izany koa ny haba rehetra) amin'ny fampiasana carte de crédit na ny fomba fandoavam-bola hafa ananantsika amin'ny rakitsary ho anao. Azo averina amin'ny alàlan'ny fangatahana ny fangatahana OPS amin'ny alàlan'ny fanoratana ny fanavaozana.
Fees; Payment. Amin'ny fisoratana anarana amin'ny kaonty Serivisy dia manaiky ianao handoa ny OPS ny saram-panomanana sy ny sarany miverimberina. Ny sarany azo ampiharina dia hosoratana manomboka amin'ny andro nananganana ny serivisinao ary mialoha ny fampiasanao serivisy toy izany. Ny OPS dia manana ny zon'ny fanovana ny fe-potoana fandoavam-bola amin'ny telopolo (30) andro mialoha ny fampandrenesana an-tsoratra anao. Ny serivisy dia azonao foanana amin'ny fotoana rehetra amin'ny telopolo (30) andro fampandrenesana an-tsoratra ho an'ny OPS Support. Raha toa ny serivisinao dia manana fidirana amin'ny fanohanana mailaka laharam-pahamehana. "Fanohanana mailaka" dia ny fahaizana manao fangatahana fanampiana ara-teknika amin'ny alàlan'ny mailaka amin'ny fotoana rehetra (miaraka amin'ny ezaka mety ataon'ny OPS hamaly ao anatin'ny iray andro fiasana) momba ny fampiasana ny Serivisy VIP. Ny "laharam-pahamehana" dia midika fa ny fanampiana dia laharam-pahamehana noho ny fanampiana ho an'ireo mpampiasa ny serivisy opskar.com mahazatra na maimaim-poana. Ny fanampiana rehetra dia homena mifanaraka amin'ny fanao, fomba fanao ary politika mahazatra an'ny OPS.
Andraikitry ny mpitsidika tranonkala. Ny OPS dia tsy nandinika, ary tsy afaka nandinika, ny fitaovana rehetra, ao anatin'izany ny rindrambaiko solosaina, napetraka tao amin'ny tranokala, ary noho izany dia tsy tompon'andraikitra amin'ny atiny, ny fampiasana na ny vokany. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny tranokala, ny OPS dia tsy maneho na milaza fa manohana ny fitaovana napetraka izy io, na mino izy ireo fa marina, mahasoa na tsy manimba. Tompon'andraikitra amin'ny fandraisana fepetra ilaina ianao mba hiarovana ny tenanao sy ny rafitry ny solosainao amin'ny viriosy, kankana, soavaly Trojan, ary atiny hafa manimba na manimba. Ny tranokala dia mety misy atiny manafintohina, tsy mendrika, na maharikoriko, ary koa atiny misy tsy fahatomombanana ara-teknika, hadisoan-tsoratra ary hadisoana hafa. Ny tranokala dia mety misy koa zavatra manitsakitsaka ny tsiambaratelo na ny zon'ny dokam-barotra, na manitsakitsaka ny fananana ara-tsaina sy ny zon'ny tompony hafa, an'ny antoko fahatelo, na ny fisintomana, ny fakana tahaka na ny fampiasana azy ireo dia iharan'ny fe-potoana fanampiny, voalaza na tsy voalaza. Ny OPS dia mandà ny andraikitra rehetra amin'ny zava-dratsy ateraky ny fampiasan'ny mpitsidika ny tranokala, na ny fisintomana ataon'ireo mpitsidika atiny napetraka tao.
Content navoaka tao amin'ny tranonkala hafa. Tsy mbola nandinika izahay, ary tsy afaka averina jerena, ny fitaovana rehetra, anisan'izany ny rindrambaiko solosaina, azo jerena ao amin'ny vohikala sy tranonkala mifandraika amin'ny rohy opskar.com, ary mampifandray amin'ny opskar.com. Yourcompany tsy manana fanaraha-maso ireo tranonkala tsy webcompany anao sy tranonkala, ary tsy tompon'andraikitra amin'ny votoatiny na ny fampiasany. Amin'ny fampifandraisana amin'ny tranonkala tsy-yourcompany na tranonkala, OPS dia tsy maneho na milaza fa manohana ny tranonkala na tranonkala izany. Ianao no tompon'andraikitra amin'ny fitandremana ny fepetra ilaina mba hiarovana ny tenanao sy ny rafitry ny ordinateranao amin'ny viriosy, kankana, soavaly Trojan, ary ny votoaty hafa manimba na manimba. OPS dia manambara ny andraikitra rehetra amin'ny ratsy rehetra vokatry ny fampiasanao ny tranonkala tsy misy ops ary ny tranonkala.
Fandikana ny zon'ny mpamorona sy ny politika DMCA. Satria mangataka ny hafa hanaja ny zony hanana fananana ara-tsaina ny orinasanao dia manaja ny zon'ny fananana ara-tsaina an'ny hafa izy. Raha mino ianao fa manitsakitsaka ny zon'ny mpamorona anao ny akora apetraka na ampifandraisin'ny opskar.com dia amporisihina ianao hampandre ny OPS mifanaraka amin'ny Politikan'ny OPS Digital Millennium Copyright ("DMCA"). Ny OPS dia hamaly ireo fanamarihana rehetra ireo, ao anatin'izany ny takiana na ilaina amin'ny alàlan'ny fanesorana ireo fitaovana manimba na fanalana ny rohy rehetra mankany amin'ilay fitaovana manimba. Ny OPS dia hampitsahatra ny fidiran'ny mpitsidika sy ny fampiasany ny tranokala raha toa ka mifanaraka amin'ny tranga misy azy ny mpitsidika dia manaparitaka ny zon'ny mpamorona na zon'ny fananana ara-tsaina hafa an'ny OPS na olon-kafa. Raha misy izany famaranana izany dia tsy adidin'ny OPS ny manome famerenam-bola izay vola efa naloany tamin'ny OPS.
Fananana ara-tsaina. Ity fifanarahana ity dia tsy hamindra avy amin'ny orinasanao aminao OPS na fananana ara-tsaina avy amin'ny antoko fahatelo, ary ny tsara rehetra, ny titre sy ny zanabola ary ho an'io fananana io dia hijanona (satria eo anelanelan'ny andaniny sy ny ankilany) miaraka amin'ny OPS ihany. OPS, opskar.com, ny logo opskar.com, sy ny mari-pamantarana hafa rehetra, ny mariky ny serivisy, ny sary ary ny logo ampiasaina amin'ny opskar.com, na ny tranokala dia mari-pamantarana na mari-pamantarana voasoratra anarana an'ny OPS na ireo manana fahazoan-dàlana OPS. Marika hafa, mariky ny serivisy, sary ary logo ampiasaina amin'ny tranokala dia mety ho mariky ny antoko fahatelo hafa. Ny fampiasanao ny tranokala dia manome anao zony na fahazoan-dàlana hamerina na raha tsy izany dia mampiasa marika OPS na marika fahatelo.
Dokam-barotra. OPS dia manana zo hizotra dokam-barotra ao amin'ny blôginao raha tsy efa nividy kaonty tsy misy adiresy.
Attribution. Ny OPS dia manana ny zony haneho rohy fanondroana toy ny 'Blog at opskar.com,' mpanoratra lohahevitra, ary ny lohatenin-tsoratra ao amin'ny footer blog na toolbar anao.
Vokatra mpiara-miasa. Amin'ny alàlan'ny fampiatoana ny vokatra mpiara-miasa (oh: lohahevitra) avy amin'ny iray amin'ireo mpiara-miasa aminay, dia manaiky ny fe-potoam-panompoan'io mpiara-miasa io ianao. Azonao atao ny miala amin'ny fe-potoam-piasan'izy ireo amin'ny fotoana rehetra amin'ny alàlan'ny fampiatoana ny vokatra mpiara-miasa.
Domain Names. Raha misoratra anarana anarana ianao, mampiasa na mamindra anarana nomena anarana efa voasoratra teo aloha, dia ekenao ary ekenao fa ny fampiasana ny anaran'ny sehatra dia iharan'ny politika ao amin'ny Internet Corporation ho an'ny anarana voatondro sy isa ("ICANN"), ao anatin'izany ny Zo sy andraikitra amin'ny fisoratana anarana.
Fiovana. Ny OPS dia mamaritra ny zo, amin'ny fahamendrehany irery, hanova na hanolo ny ampahany amin'ity fifanarahana ity. Andraikitrareo ny hanamarina matetika ny fifanarahana ity fanovana ity. Ny fampiasanao tsy tapaka na ny fidirana amin'ny tranonkala taorian'ny famoahana ny fanovana rehetra amin'ity fifanarahana ity dia ny fanekena ireo fanovana ireo. OPS koa dia afaka manolotra tolotra vaovao sy / na vaovao amin'ny alàlan'ny Website (anisan'izany ny famoahana fitaovana vaovao sy loharanom-baovao vaovao). Ny endri-javatra vaovao sy / na tolotra toy izany dia tsy maintsy ampiharina amin'ny fepetra sy ny fepetra momba ny fifanarahana.
Famaranana. Ny OPS dia mety hampiato ny fidiranao amin'ny rehetra na amin'ny ampahany amin'ny tranokala amin'ny fotoana rehetra, misy na tsy misy antony, na misy na tsy misy fampandrenesana, mahomby eo noho eo. Raha te hampitsahatra ity fifanarahana ity ianao na ny kaontinao opskar.com (raha manana ianao) dia azonao atao ny mijanona tsy mampiasa Internet intsony. Na eo aza izany voalaza teo aloha izany, raha manana kaonty serivisy voaloa ianao, ny kaonty toy izany dia tsy maintsy esorin'ny OPS raha toa ka manitsakitsaka ity fifanarahana ity ianao ary tsy mahavita manasitrana izany fanitsahana izany ao anatin'ny telopolo (30) andro aorian'ny fampandrenesan'ny OPS aminao momba izany; Raha toa ka afaka mamarana ny tranokala avy hatrany ny OPS ho ampahany amin'ny fanakatonana ankapobeny ny serivisinay. Ny fepetra rehetra amin'ity fifanarahana ity izay araka ny natiora azy dia tokony haharitra amin'ny famaranana dia haharitra mandritra ny famaranana, ao anatin'izany, tsy misy fetrany, ny fahazoana tompony, ny fihenan'ny fiantohana, ny onitra ary ny fetran'ny andraikitra.
Fialana andraikitra amin'ny Warranty. Ny tranokala dia omena "toy ny". Ny OPS sy ireo mpamatsy ary ireo manana fahazoan-dàlana amin'izany dia manafoana ny antoka rehetra, na amin'ny fomba ahoana na amin'ny heviny, ao anatin'izany, tsy misy fetrany, ny fiantohana ara-barotra, fahasalamana ho an'ny tanjona manokana ary tsy fandikan-dalàna. Na ny orinasanao na ireo mpamatsy sy mpanome alalana azy, dia tsy misy miantoka ny antoka fa tsy misy hadisoana ny tranokala na mitohy na tsy tapaka ny fidirana amin'izany. Fantatrao fa misintona avy amin'ny, na mahazo atiny na serivisy amin'ny alalàn'ny tranokala araka ny safidinao manokana sy ny loza mety hitranga ianao.
Limitation of liability. Na izany aza, ny OPS, na ny mpamatsy azy, na ny nahazoan-dàlana, dia mety ho tompon'andraikitra amin'ny foto-kevitr'ity fifanarahana ity amin'ny fifanarahana, ny fahamendrehana, ny andraikitra hentitra na ny lalàna hafa na ara-drariny ho an'ny: (i) ny fahavoazana manokana, manimba na mampidi-doza; (ii) ny fandaniana amin'ny fividianana vokatra na serivisy; (iii) ny fampiatoana ny fampiasana na ny fahaverezana na ny kolikoly amin'ny angon-drakitra; na (iv) ho an'ny isa izay mihoatra ny saram-panananao omena anao amin'ny OPS amin'ity fifanarahana ity mandritra ny roambinifolo (12) volana talohan'ny anton'ny hetsika. Ny OPS dia tsy manana andraikitra amin'ny tsy fahombiazany na ny fahatarany noho ny raharaha tsy voafehifehy loatra. Ireo voalaza etsy ambony ireo dia tsy mihatra amin'ny fepetra voarara noho ny lalàna manan-kery.
General Representation and Warranty. Maneho sy manome toky ianao fa (i) ny fampiasanao ny Website dia hifanaraka tanteraka amin'ny politikan'ny OPS Privacy, miaraka amin'ity fifanarahana ity sy amin'ny lalàna sy fitsipika rehetra azo atao (anisan'izany ny lalàna na fitsipika eo an-toerana ao amin'ny firenena, fanjakana, tanàna , na faritra hafa an'ny governemanta, momba ny fitondran-tserasera sy ny votoatiny azo ekena, ary tafiditra ao koa ny lalàna mifandraika amin'ny fampitaovana ny angona angona angona avy any Etazonia na ny firenena misy anao) ary (ii) ny fampiasanao ny tranokala dia tsy handratra na tsy manara-dalàna ny zo ara-tsaina avy amin'ny antoko fahatelo.
Tamby. Manaiky ianao handoa onitra sy hihazona ny OPS tsy mampidi-doza, ny mpifanaraka aminy, ary ny mpahazo alalana azy, ary ny talen'ny, tompon'andraikitra, ny mpiasa ary ny masoivohony avy ary manohitra ny fitakiana sy ny fandaniana rehetra, ao anatin'izany ny saram-pisolovan'ny mpisolovava, mivoaka avy amin'ny fampiasanao ny tranokala, ao anatin'izany fa tsy voafetra amin'ny fandikana io fifanarahana io.
Miscellaneous. Ity fifanarahana ity dia mandrafitra ny fifanarahana iray manontolo eo amin'ny OPS sy ianao momba ny lohahevitra eto, ary azo ovaina amin'ny alàlan'ny fanitsiana an-tsoratra nosoniavin'ny tompon'andraikitra iray ao amin'ny orinasa misy anao ihany izany, na amin'ny alàlan'ny fandefasana ataon'ny orinasanao kinova nohavaozina. Afa-tsy ny lalàna mihatra, raha misy, dia manome amin'ny fomba hafa, ity fifanarahana ity, ny fidirana amin'ny na fampiasana ny tranokala dia hanjakan'ny lalàna any amin'ny fanjakan'ny California, Etazonia, tsy manilika ireo fifanolanana nomen'ny lalàna, ary ny toerana sahaza ny ny fifanolanana rehetra mipoitra na misy ifandraisany amin'ny iray amin'izany dia ny fitsarana fanjakana sy federaly any San Francisco County, Kalifornia. Afa-tsy ny fangatahana fanampiana ara-drariny na ara-drariny momba ny zon'ny fananana ara-tsaina (izay azo entina any amin'ny fitsarana mahefa rehetra nefa tsy misy fatorana fatorana), ny fifanolanana rehetra mipoitra eo ambanin'ity fifanarahana ity dia halamina araka ny lalàna mifehy ny arbitration feno an'ny Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. ("JAMS") ataon'ny mpanelanelana telo voatendry mifanaraka amin'izany fitsipika izany. Ny arbitration dia hatao any San Francisco, California, amin'ny teny anglisy ary ny fanapaha-kevitra arbitral dia azo ampiharina amin'ny fitsarana rehetra. Ny antoko manan-kery amin'ny hetsika na firosoana amin'ny fampiharana ity fifanarahana ity dia manan-jo handoa ny sarany sy ny saran'ny mpisolovava. Raha misy ampahany amin'ity fifanarahana ity izay mihazona tsy manan-kery na tsy azo ampiharina, io ampahany io dia heverina ho taratry ny fikasan'ny antoko voalohany, ary ny ampahany sisa dia hijanona ho manan-kery tanteraka. Ny fanilihana na avy amin'ny ankolafy misy ny vanim-potoana na ny fepetra misy amin'ity fifanarahana ity na izay fandikana azy, na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana iray dia tsy hanafoana izany fe-potoana na fepetra izany na ny fandikana azy manaraka. Azonao atao ny manendry ny zonao eo ambanin'ity fifanarahana ity amin'ny antoko rehetra manaiky, ary manaiky hofehezin'ny, ny fepetra sy fepetra; Ny OPS dia afaka manendry ny zony ao anatin'ity fifanarahana ity tsy misy fepetra. Ity fifanarahana ity dia hamatotra ary hiantoka ny tombotsoan'ny antoko sy ny mpandimby azy ary ny andraikitra nomena azy.
Fiompiana fanadiovana tsara indrindra 2019
Ny fandrehetana rivotra tsara indrindra ao amin'ny 2019
Vokatra fanadiovana anaty fiara
Tsara ny tabilao matevina
Ahoana ny fomba hanadiovana ny fiara anatiny amin'ny vokatra ao an-trano
Multifunctional Cleaner Cleaner
Vidiny ho an'ny fiara
Ny fitaovana fanasan-damba tsara indrindra